एमसीसीबारे एमालेले धारणा बनाएको छैन : भट्टराई : RajdhaniDaily.com
HomeBreaking Newsएमसीसीबारे एमालेले धारणा बनाएको छैन : भट्टराई
Breaking Newsप्रदेशप्रदेश ३राजनीति
एमसीसीबारे एमालेले धारणा बनाएको छैन : भट्टराई
काठमाडौं । नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले आफ्नो पार्टीले मिनिलियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसिसी) बारे अहिले कुनै धारणा नबनाएको बताएका छन् ।
उनले सत्तासिन दलहरूले धारणा बनाएपछि आफ्नो पार्टीले धारणा बनाउने बताए । ‘हाम्रो पार्टीले अहिले एमसिसीको बारेमा कुनै धारणा बनाएको छैन । सरकारले एमसिसी ल्याउन खोजेको हो कि होइन ? सत्तासिनको धारणा दल एमसिसी बारे के छ भन्नेमा हामी बेखबर छौं । हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षी दलको हो,’ उनले भने ।
नेता भट्टराईले एमसिसी पारित गराउन सरकारलाई आफूहरूको आवश्यकत्ता नै नपर्ने दाबी गरे । एमसिसीबारे एमालेको अहिले पोजिसन तय नभएको उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता उदयशमशेर जबराले भने एमसिसीलाई पास गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले एमसिसी पारित गराउन संसद‍्भित्र र संसद्‍बाहिर रहेका सबै दलबीच सहमति गराउनुपर्ने बताए । उनले एमसिसी सहयोग अनुदान भएकोले यसले देशलाई फाइदा नै हुने बताए ।
नेता राणाले एमसिसी सहयोग लगभग ५० वटा देशले लिएको भन्दै तीमध्ये हाम्रो देशको जस्तै भूगोल भएको मंगोलियाले दुई पटक सहयोग लिइसकेको स्मरण गराए ।
अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने कुरा गलत भएको उनको दाबी छ । ‘यो झुठो हो । एमसिसी इकोनोमिक सपोर्ट हो । अमेरिकी सेना नेपाल आउने भन्ने भ्रम फैलाइएको छ,’ उनले भने ।
पूर्वाधार विकास विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले एमसिसीमा भएका गलत प्रावधानहरू सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस अध्यादेश खारेज नभई जसपाले मन्त्री पठाउँदैन : उपेन्द्र यादव
उनले एमसिसी सम्झौता गर्दासम्म नेपालको तर्फबाट पर्याप्त लापरबाही भएको बताए । ‘राष्ट्रिय हित के–के हुन ? भन्ने विषयमा लापरबाही भयो । अमेरिका नेपालमा ४०–५० वर्षदेखि विकासको सहयोगी हो । सम्झौतामा राजनीतिक र रणनीतिक प्रकृतिका शर्त छन्,’ उनले भने । उनले अहिलेसम्म ४६ देशमा एमसिसी सम्झौता भएको र तीमध्ये तीन/चार देशमा सम्झौता खारेज भएको स्मरण गराए ।
‘सम्झौतामा अमेरिकी कानुन लागु हुने कुरा लेखिएको छ । कम्प्याक्टको दफा ३.३ मा यो कुरा लेखिएको छ । वैदेशिक अनुदान कहिल्यै पनि फ्रि हुँदैन । चीनले पोखरा विमानस्थल बनायो, त्यहाँ उसले आफ्नै ठेकेदार राखेको छ । भारतले हुलाकी राजमार्ग बनाउँदा पनि त्यस्तै गरेको छ । यो सम्झौतामा अमेरिकी स्वार्थलाई बढावा दिने कुरा लेखिएको छ,’ उनले भने ।
उनले एमसिसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) को अंग हो कि होइन भन्ने प्रश्न नै गलत रहेको पनि सुनाए । ‘कुटनीतिमा देखिने र नदेखिने पाटा हुन्छन् । यो एमसिसीमा ९ वटा शर्त अनन्तकालसम्म रहने कुरा लेखिएको छ । ५.५ मा हेर्दा अमेरिकी हितभन्दा बाहिर हुनुहुँदैन भनिएको छ,’ उनले भने ।
काठमाडौं । सामाजिक कार्यको साथमा नेपाली गीत संगीतमा सक्रिय स्रष्टा र सर्जकको सिर्जनालाई बचाई राख्ने उदेश्य साथ स्थापित स्मुल सिङ्गिङ ओपन ग्रुपको प्रस्तुतिमा रहेको...
काठमाडौं । कञ्चनपुरमा सोमबार साँझ भारतीय तस्कर समूहको आक्रमणबाट नेपालका तीन जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन् । साँझ करिब ८ बजेको समयमा दोधाराचाँदनी...
सर्लाहीमा समुदायस्तरमै कोरोना संक्रमण
सर्लाही । सर्लाहीमा कारोना संक्रमण समुदायमा स्तरमा फैलिएको छ । हिजो बुधवार बरहथवा नगरपालिकामा एकैपटक २६ जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको र तिमध्ये सबै समुदायमै...
शाकाहारी काम छैन भन्नुको अर्थ चिकेन चिल्ली खान खोजेका हैनन् होला त : प्रधानमन्त्री
सिराहा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिंसात्मक आन्दोलन गर्न लागेको बताएका छन् । प्रचण्डले अब शाकाहारी आन्दोलन गरेर काम छैन भनेको भन्दै...
वडा कार्यालयलाई ४ रोपनी जग्गा निःशुल्क प्रदान
पाँच लाख क्षतिपुर्ति पाउने भएपछि बालकको शब उठ्यो
आशिष स्मृति पुरस्कार घिमिरेलाई
आयो, मातातीर्थ औंसीमा डा. डीआरको आमा गीत
चार महिनामा उत्पादन गरेको तरकारीले वर्षदिनको घर खर्च
दाङका भिम बुढाथोकीको भारतको गोवामा मृत्यु
अर्थमन्त्री पौडेलको परिकल्पना : जलसम्पदाको सदुपयोग हुने मुलुककै ठूलो परियोजना
विश्रामपुरको निती तथा योजना तर्जुमा तय
एजेन्सी - September 16, 2021
टेनिस रोका - September 18, 2021
२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस कांग्रेस १४औं महाधिवेशनः १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन अनिश्चित